Akwụkwọ Jessica Hawthorne-Castro na Martech Zone |
Edemede site na Ọ bụ Jessica Hawthorne-Castro
E nweghị ajụjụ banyere ya, retail na-enwe a ike mgbanwe. Xgba ọsọ mgbe niile n’etiti ọwa niile na-eme ka ndị na-ere ahịa ka ha mee ka ahịa na ahịa ha dị elu, ọkachasị ka ha na-abịaru Black Friday na Cyber ​​Monday. Dijitalụ ahịa, nke gụnyere ntanetị na ekwentị mkpanaaka, bụ n'ụzọ doro anya na-enwu gbaa na mkpọsa. Cyber ​​Monday 2016 kwuru aha maka ụbọchị ahịa kachasị n'ịntanetị na akụkọ ntolite US, na ijeri $ 3.39 na ịntanetị. Black Friday bịara
Tọzdee, Eprel 13, 2017 Ọ bụ Jessica Hawthorne-Castro
Dọrọ ndị ahịa ọhụrụ ma na-emeziwanye akara ngosi akara aka bụ ihe ịma aka na-adịgide adịgide maka ndị na-ere ahịa. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi na-adọpụ uche na ihe ndọpụ uche nke nyocha ọtụtụ, ọ na-esiri ike ịghachite na ọchịchọ nke ndị na-azụ ahịa na ozi ezubere iche. Ndị ahịa na-eche ihe ịma aka a ihu na-atụgharịkarị na "tụba ya na mgbidi iji hụ ma ọ na - arapara" nso, kama usoro atụmatụ echebara echiche nke ọma. Akụkụ nke atụmatụ a kwesịrị ịgụnye mkpọsa mgbasa ozi TV,
Dika usoro mgbasa ozi dijitalụ na-aba ụba na morph, ụlọ ọrụ na-etinyekwu ego na mgbasa ozi telivishọn iji ruo ndị na-ekiri ha na-etinye awa 22-36 na-ekiri TV kwa izu. Agbanyeghi ihe mkpọsa ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere ike iduga anyị ikwere n'ime afọ ole na ole gara aga na-ekwu banyere mbelata nke telivishọn dị ka anyị si mara ya, mgbasa ozi telivishọn bụ nke dị ndụ, nke ọma, na-arụpụta ezigbo nsonaazụ. N'ime nnyocha MarketShare mere n'oge na-adịbeghị anya nke nyochachara arụmọrụ mgbasa ozi n'ofe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka